‘जय भोले’ निर्देशनमा अशोक शर्मा चुकेको हो ? यस्तो छ जवाफ « Janata Samachar
‘जय भोले’ निर्देशनमा अशोक शर्मा चुकेको हो ? यस्तो छ जवाफ
प्रकाशित मिति :2November, 2018 1:06 pm
काठमाडौंँ । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले आफ्नो चलचित्र ‘जय भोले’मा सबै भेराइटी भएको बताउनुभएको छ । समसामयिक बिषयको विचार एवं बिश्लेषण गरिने जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सन्दर्भ’मा कुराकानी गर्दै निर्देशक शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
१२ बर्षपछि चलचित्र निर्देशनमा फर्किएका अशोक शर्माले दर्शकहरु आफ्नो कारणले नभइ चलचित्रमा उठाइएइको बिषयबस्तुको कारण हलसम्म पुगेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै निर्माता तथा निर्देशक शर्माले चलचित्रले लगानी सुरक्षित गरिसकेको र अब नाफाको ब्यापारमा जाने समेत स्पस्ट पार्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तोता शोभा त्रिपाठीले ‘यसपटक अशोक शर्माको निर्देशकिय पक्षमा चुक्नुभएको हो की ?’ भन्ने प्रश्न सोधेकी थिइन् । प्रश्नको जवाफमा शर्माले ब्यवसायिकतामा ध्यान दिएको स्वीकार गरेका छन् । साथै अशोकले प्रश्नको यस्तो जवाफ दिएका छन् । हेरौँ पुरै कार्यक्रमः